Santorini တွင်တွေ့မြင်ရမည့်အရာများ - ရှေးဟောင်းသုတေသန၊ အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများ၊ ကမ်းခြေများနှင့်နေများ | ခရီးသွားသတင်း
အဘယ်အရာကို Santorini အတွက်ကြည့်ပါ
လူးဝစ် Martinez | | Santorini, ခရီးသွား
အကယ်စင်စစ်သင်သည်အဖို့ခရီးသွားလာစဉ်းစားပါပြီ ဂရိကျွန်းစု။ ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာ Santorini မှာဘာကျွန်းကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုသင်စဉ်းစားမိလိမ့်မယ် ဆိုင်ကလုန်း ၎င်းသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်အလှဆုံး၊ ရေပန်းစားဆုံးနှင့်တန်ဖိုးထားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အေဂျီယန်ပင်လယ်အတွင်းရှိအံ့ဖွယ်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လှပမှုနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးများအားလုံးအတွက်ထူးခြားသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
Santorini တွင်မည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်လိုသည်ကိုသိလိုပါက၎င်းခရီးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်သဘာ ၀ အံ့ဖွယ်ရာများ၊ ၎င်း၏အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများနှင့်၎င်း၏အဖြူနှင့်ယူနန်ပြည်နယ်၏ကျောက်တုံးအိမ်များ။
1 အဘယ်အရာကို Santorini အတွက်ကြည့်ပါ
1.2 Santorini တွင်ပထမဆုံးတွေ့ရမည့် Fira သို့မဟုတ် Thira
2 Santorini ဆွဲဆောင်မှု
3 Santorini မှာဘာစားရမလဲ
4 Santorini ကိုဘယ်သွားရမလဲ
5 Santorini န်းကျင်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
ဘီစီသုံးထောင်စုနှစ်ကတည်းကနေထိုင်ခဲ့သော Santorini ၏မူလအစသည်ဒဏ္myာရီထဲ၌ရစ်ပတ်ရစ်နေသည်။ ဂရိတို့သည်အလွန်သဘောကျနှစ်သက်ကြသည်၊ အချို့သောသီအိုရီများကထိုဒဏ္icalာရီတည်ရှိမှုကိုခုခံကာကွယ်သည်။ အတ္တလန္တိတ်.
သို့သော်ပိုမိုလက်တွေ့ကျသောရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်းသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အတိုင်းကြီးမားသောအရာဖြစ်သည် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု သခင်ယေရှုခရစ်တော်မတိုင်မီ ၁၇ ရာစုတ ၀ ိုက်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာနယ်မြေအများစုကိုပင်လယ်ထဲသို့နစ်မြုပ်စေခဲ့သည်။ အဖြစ်လူသိများဒီအဖု Minoan ဤကျွန်းသည်ဤကြေးဝါခေတ်ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းကနှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အကြီးမားဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယင်းကြောင့် Santorini သည်ပုံစံတစ်မျိုးကိုတင်ပြသည် လဝက် မင်းမြင်နိုင်တဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာအမြင့်ဆုံး အံ့မခန်းကမ်းပါး။ မီးတောင်ကြီးရှိသည့်လခြမ်းပိုင်း၏အတွင်းပိုင်းတွင်လက်ရှိတွင်အလွန်ကြီးမားသောလှပသောအခြားသေးငယ်သောကျွန်းများလည်းရှိသည်။ ဒါတွေအားလုံးက Santorini မှာမင်းမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမင်းကိုပြဖို့ငါတို့ကို ဦး ဆောင်နေတယ်။
Akrotiri ရှေးဟောင်းသုတေသန site ကို
ဒါဟာအထင်ကြီးလက်ခံရရှိသောနာမကိုအမှီ Minoan ခေတ်မှရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာ သောမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကဖုံးလွှမ်းအတိအကျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလွန်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ဒါဟာအတူဖြစ်ပျက်နှင့်ဆင်တူသည် ပုသိမ် နှင့်အီတလီကျွန်းဆွယ်အပေါ် Herculaneum ။
တကယ်တော့ဒီ site မှာပထမဆုံးတွေ့ရှိရတဲ့အိမ်ကတော့စုံလင်တဲ့အိမ်တစ်လုံးပါ။ လောလောဆယ် Akrotiri တွင်ရှေးဟောင်းမြို့၏လမ်းများ၊ Adobe နှင့်ဆောက်လုပ်ထားသောနံရံသုံးပန်းချီကားများနှင့်ထိုမြို့သူမြို့သားများ၏ဘဝနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များစွာပေးသောအိမ်သုံးမျိုးကိုတွေ့နိုင်သည်။ သင့်အား၎င်း၏အကြံဥာဏ်ပေးရန်, လက်ဝှေ့သမားနှစ် ဦး ပါသည့်နံရံဆေးရေးပန်းချီကားတစ်ချပ်ပင်ရှိသည်။
Santorini တွင်ပထမဆုံးတွေ့ရမည့် Fira သို့မဟုတ် Thira
Thira (သို့) Fira သည် Santorini ၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီးသင့်တွင်ထိုတွင်ရှိသည် ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်၎င်းသည်ထိုနေရာတွင်တွေ့ရသောကြွေထည်များနှင့်ပန်းပုများစွာကိုနေရာချထားသည့်အတွက်ယခင် site သို့သင့်လည်ပတ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ဒါဟာမြို့ထဲမှာတစ်ခုတည်းသောပြတိုက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်မှာလည်းရှိတယ် သမိုင်းမ; ဝိုင် နှင့်သင်၏အာရုံကိုဖမ်းလိမ့်မည်ဟုတ: ဘိုင်ဇန်တိုင်းဂီတတူရိယာပြတိုက်.
သို့သော် Fira တွင်သေးငယ်သောအရွယ်အစားရှိသော်လည်းအထိမ်းအမှတ်များစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏ ရှေးရိုးစွဲဘုရားရှိခိုးကျောင်းအဝိုင်းပုံသဏ္,ာန်၊ အဖြူရောင်နံရံများနှင့်အံ့မခန်းဖွယ်ခေါင်းလောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်း၌Christóforos Assimis ၏လှပသောနံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်ပန်းခြံအချို့ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ နှင့်လည်း ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, သင်သည်မြို့၏ပုံမှန် cobbled လမ်းများမှတဆင့်ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။
Fira သို့မဟုတ် Thira
သူတို့သည် Santorini တွင်မြင်တွေ့ရသောတစ်ခုတည်းသောဘုရားကျောင်းမဟုတ်ပါ။ ဖီရာတစ်ခုတည်းတွင်ဘိုင်ဇန်တိုင်းချာ့ချ် ၄၀၀ ခန့်သည် ၄ ​​င်းတို့၏အပြာအပြာရောင်များအတွက်ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ လူထုအခြေပြုဗိသုကာနှင့်စပ်လျဉ်း။ မီးမောင်းထိုးပြသည် gyzis နန်းတော်၁၈ ရာစုကဓာတ်ပုံပြတိုက်တစ်ခုတည်ရှိသည့်လှပသောအိမ်ကြီးဖြစ်သည်။
ဤမြို့ငယ်သည်လက်ရှိတွင်မြို့တော်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော်လည်းအနည်းငယ်ပိုမြင့်သည် Santorini လသာဆောင်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်နေဝင်ချိန်တွင်ပင်လယ်အော်နှင့် ပတ်သက်၍ စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသောအမြင်များကိုသင်ပေးသည်။ ထိုဒေသရှိနေထိုင်သူများကထိုအရပ်မှသူတို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်ဟုဆိုသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးနေဝင်ချိန်များ သူတို့သည်အကြောင်းပြချက်အချို့ရှိသည်။
မြို့တော်မှကျွန်း၏အနောက်ဘက် ၁၁ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်ဤကဲ့သို့သောရှုခင်းများကိုမြင်တွေ့နိုင်သည် အံ့မခန်းကမ်းပါး။ အဖြူရောင်ဖြူထားသောနံရံများနှင့်အပြာရောင်ဖြင့်အမိုးခုံးပုံသဏ္ဌာန်မျက်နှာကျက်များပါရှိသော၎င်း၏အိမ်များသည်သင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။
Athinios ၎င်းသည်ကျွန်းပေါ်ရှိအရေးအကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည် ကမာရီ ၎င်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးကမ်းခြေရှိသည်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် ကဗျာ ထိုတွင်ထင်ရှားသောအလယ်ခေတ်ရဲတိုက်နှင့်အတူကျော်ကြားသော Santorini ဝိုင်ထုတ်လုပ်မှု၏အဓိကအချက်အချာဖြစ်သည် Messa Gonia။ နောက်ဆုံးအားဖြင့် ပရီဆာ ၎င်း၏အနက်ရောင်သဲကမ်းခြေထွက်ဆိုလိုတာပါ။
Santorini မှာမင်းမြင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ အဆုံးမဲ့လုပ်ဆောင်မှုများကိုလည်းသင်လုပ်နိုင်သည်။ မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်တစ်ခုမှာ ရှေးဟောင်းမီးတောင်၏ကယ်လ်ဒါရာသို့လှေခရီးစဉ်။ ယင်း၏ကျွန်းငယ်များပေါ်တွင်သင်ကအနက်ရောင်ချော်ရည်ကြမ်းပြင်များတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်။ မီးတောင်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ထိုဒေသရှိရေပူစမ်းများ၌သင်ရေချိုးနိုင်သည်။
မတူနိုင်တဲ့အမြင်တွေကိုပေးတဲ့နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကဒီကိုယူခြင်းဖြစ်တယ် ကေအိုင်အေ Fira ကို၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းဟောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။ ဒီလှည့်လည်မှုကိုမြည်းဖြင့်လည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်တိရစ္ဆာန်များအားအလွဲသုံးစားပြုရန်စဉ်းစားသောကြောင့်၎င်းကိုမနှစ်သက်သောသူများရှိသည်။
Santorini လည်းရှိတယ် တောင်တက်လမ်းကြောင်း။ လူကြိုက်အများဆုံးသည်ပူးပေါင်းသူဖြစ်သည် Imerovigli နှင့်အတူ Oia ချောက်ကမ်းပါးတစ်လျှောက်ပြေးသောသဲလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်။ ထိုနည်းတူစွာကျွန်း၏ကမ်းရိုးတန်းများသည်ရေငုပ်ခြင်းနှင့်ရေငုပ်ခြင်းတို့ကိုလေ့ကျင့်ရန်သင့်တော်သည်။
အလည်အပတ်ခရီး Santorini ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်စပျစ်ဥယျာဉ်များ ဒါမှမဟုတ်လုပ်ပါ ကမ်းခြေလမ်းကြောင်း သူတို့သည်ကျွန်းပေါ်တွင်သင်လုပ်နိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုများလည်းရှိသည်။ ဤသဲများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးဖြစ်သော Perissa အနက်ရောင်သဲများပါဝင်သည်; Akrotiri အနီးရှိ Red Beach သို့မဟုတ် White ကမ်းခြေ၊ ယခင်ကမ်းခြေရှိ ဤဒေသများလည်းသွက်ရှိသည် ညဘဝ။ သို့သော်သင်သည် Santorini ၏ gastronomy ကိုလည်းစမ်းသပ်သင့်သည်။
Santorini တွင်မည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပြီးသည့်အခါမည်သည့်ခရီးစဉ်အတွက်မဆိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော၎င်း၏အရသာရှိသောအစားအစာကိုအာရုံစိုက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယုတ္တိနည်းအရကျွန်း၏အစားအစာသည်မြေထဲပင်လယ်အစားအစာတွင်ပါဝင်သည် သံလွင်ဆီ, အ miel နှင့် ခရမ်းချဉ်သီး ၎င်း၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများအဖြစ်။
Santorini သို့သင်လည်ပတ်ရန်ကြိုးစားရမည့်ပုံမှန်ဟင်းလျာများမှာလူကြိုက်များသည် မိုးဇက်အသား၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဝိုင်နီနှင့်သစ်ကြံပိုး၊ ကွဲပြားခြားနားသည် သုပ် အရာအတွက် feta ဒိန်ခဲအမြဲရှိ၏ က နေပြည်တော်စပျစ်ပင်အရွက်နှင့်ပြင်ဆင်သောစွပ်ပြုတ်၊ က avgolemonoကြက်သား၊ သံပုရာနှင့်ကြက်ဥ၊ သို့မဟုတ် ဝိဇ္ဇာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Moorish skewer ဆင်တူ။
တစ် ဦး aperitif အဖြစ်, အ ကဲယားယံသောအသားဘောလုံးအချို့။ နှင့်အဝက်အူချောင်းများအတွက်သည် tzatzikiဒိန်ချဉ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဇီယာစေ့၊ သခွားသီးနှင့်သံလွင်ဆီတို့ပါဝင်သည်။
နောက်ဆုံးအချိုပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း။ Santorini ၏အစားအစာသည်အဓိကကျသည်။ လတ်ဆတ်တဲ့အသီး။ ဒါပေမယ့်လည်းရည်ထဲမှာခေါ်တဲ့ပန်းကန် gliká couta liou။ အညီအမျှချိုမြိန်ဖြစ်ကြသည် ကဗျာတစ်ပျားရည်, puff pastry, vanilla နှင့်ဗာဒံသီးကိတ်မုန့်; က moustalevriá, စပျစ်သီး must နဲ့ပြင်ဆင်ကိတ်မုန့်; က မင်းကတစ်ပျားရည်, puff pastry နှင့်သစ်ကြံပိုးခေါက်နှင့် karidopita, ဘရန်ဒီရည်နှင့်အတူ walnut ကိတ်မုန့်။
ဤအရာအားလုံးကို Santorini ဝိုင်ဖြင့်ဆေးကြောနိုင်သည်။ အစာစားပြီးလျှင်အစာစားရမည် ရာခ နှင့် ouzo, နှစ် ဦး စလုံးအရက်များ aniseed ။
ဂရိကျွန်းတစ် အလယ်အလတ်မြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတု, နူးညံ့သာယာသောဆောင်းရာသီနှင့်အတူ။ နွေရာသီသည်ပျမ်းမျှအပူချိန် ၃၀ ဒီဂရီခန့်ရှိသည်။ အောက်တိုဘာလနှင့်မတ်လလများပင်အတော်အတန်နွေးသည်။
မိုးရွာသွန်းမှုအတွက်မူ၎င်းတို့မှာရှားပါးပြီးအဓိကအားဖြင့်ဇန်နဝါရီလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလများတွင်အဓိကထားသည်။ ထို့ကြောင့် Santorini သို့သွားရန်မည်သည့်အချိန်မဆိုသင့်သည်။ သို့သော်အကောင်းဆုံးလများမှာဖြစ်နိုင်သည် ဇွန်နှင့်စက်တင်ဘာ။ ကျွန်းသည် ပို၍ အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးရာသီဥတုမှာလည်းပူနေဆဲဖြစ်သည်
ဆိုင်ကလုန်းကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိသည် လေဆိပ် အထူးသဖြင့်နွေရာသီတွင်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်များမှတစ်ဆင့်စပိန်မြို့အချို့မှလေယာဉ်များရောက်ရှိလာသည်။ သင်သည်အေသင်သို့မဟုတ်ကရေတေကျွန်းသို့လည်းသွားပြီး Santorini သို့ရောက်နိုင်သည် ကူးတို့.
လေဆိပ်ကနေဖီရာကိုသွားဖို့၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်းပတ်ပတ်လည်ကိုသွားဖို့သင်မှာရှိတယ် ဘတ်စ်ကားလိုင်း ယင်း၏အဓိကမြို့များကိုဆက်သွယ်။ သို့သော်လမ်းများကောင်းမွန်သော်လည်းအခြေအနေများကျဉ်းမြောင်းပြီးကွေးညွှတ်နေသောကြောင့်ခေါင်းမူးရန်မသတိထားပါ။
နိဂုံးချုပ်တွင်သင်သည် Santorini တွင်မည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်ရမည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အဲဒီမှာဘယ်လိုသွားရမလဲနှင့်၎င်း၏ gastronomy ၏အဓိကဟင်းလျာများဘာတွေလဲ။ သင်၏လက်မှတ်ကိုမြေထဲပင်လယ်ဒေသသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သာလိုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » Santorini » အဘယ်အရာကို Santorini အတွက်ကြည့်ပါ
Puerto de la Cruz, Tenerife တွင်ကြည့်ရှုရန်